Detechọpụta usoro egwu Hard disk dị mma na ịrụzi - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>ig>Detechọpụta usoro egwu Hard disk dị mma na ịrụzi
Detechọpụta usoro egwu Hard disk dị mma na ịrụzi
Ndabere: Onye ọkọlọtọ ma ọ bụ nke ọkachamara, mgbe onye ọrụ zụrụ, nzụlite Bplandatarecovery ga-ezigara onye ọrụ koodu ndebanye aha ozugbo Onye ọrụ nwere ike iji koodu ndebanye a rụọ ọrụ ozugbo na igwe dị ugbu a. Jiri; emesia, ndi otu Bplandatarecovery ga-ezitere gị igodo izo ya ezo Na izugbe, mgbe ị natasịrị igodo nzuzo ahụ n'ime ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ, ịnwere ike iji ọrụ nchaji Bplandatarecovery na kọmputa ọ bụla. N’ikpeazị, webata nsogbu ụfọdụ enwere ike ịcheta mgbe ị na - agbake. Ọ bụrụ na Bplandatarecovery na-enyocha diski ma ọ bụ nkebi ahụ, ọsọ a na-egbu ngwa ngwa, n'ozuzu n'ihi na diski ike nwere Badzọ ọjọọ. N'okwu a, ịnwere ike ịnwa itinyekwu oge na-eche maka nsonaazụ nyocha .. Ọ bụrụ na ọ na-egbu oge (dịka ọmụmaatụ, rapaara na ụfọdụ ọganihu, ọ gaghị agagharị ruo awa ole na ole), a na-atụ aro ka ị kwụsị nyocha ahụ ma zipu diski ike ya na ụlọ ọrụ ọkachamara mgbake data ọkachamara. Gwa ya. NDpMỌD:: Jiri Bplandatarecovery chọpụta ihe dị njọ nke diski diski, dị ka egosiri na foto a, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ị weghachite data, dotet na-eji Bplandatarecovery rụzie mpaghara ọjọọ ahụ, a ga-edegharị data ahụ ọzọ! Mgbe ịhọrọ draịvụ ike ya, pịa bọtịnụ òké aka nri wee họrọ “Nchọpụta okporo ụzọ adịghị mma ma rụkwaa” site na menu usoro ụzọ mkpirisi
Bplandatarecovery na - achọpụta mpaghara ọjọọ
Na nchọpụta mmapụta na windo na - arụzi, ị nwere ike ịchọpụta ihe ọjọọ nke diski ike, ma ọ bụ ịnwere ike ịnwale ịrụzi ihe ndị na - adịghị mma. Ọ dị mkpa icheta na ịkwesighi ịnwale arụmọrụ tupu mgbake data! Oge nzoputa nke nzoputa na igugu faịlị
Oge ụfọdụ, i scanomi diski ike na nkebi na-ewe oge. Na nsonaazụ nyocha, ọ na-ewe oge iji chọọ ma lelee faịlụ ndị a ga-agbake. Kedụ ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịga n'ihu na nwa oge? Bplandatarecovery na-enye ọrụ iji chekwaa nsonaazụ ọganihu nke nyocha ugbu a, dị ka egosiri n'okpuru:
Bplandatarecovery chekwaa ọganihu mgbake faịlụ
kwụsịtụ, kwụsị nyocha data gbakere, ma ọ bụ usoro nyocha ahụ sitere n'okike Mgbe ngwụcha ahụ, pịa aka nkebi ma ọ bụ diski ike ebe agbanwetara data iji chekwaa mgbake faịlụ ahụ. N'ụzọ dị otú a, oge ọzọ ị ga - aga n'ihu iweghachi data nke otu diski ike ma ọ bụ nkewa, ịnwere ike ịkpọ ọganihu mgbake nke faịlụ echekwara na windo nhọrọ mgbake, dị ka egosiri n'okpuru:
Pịa “Ibu Ibu nyocha,” ị nwere ike ibubata ọganihu nyocha nke nyocha nke ikpeazụ ị na-enweghị inyocha ọzọ, nke na-echekwa oge nke data agbake.
PreIhe nlele data furu efu
NextNkeji nbuputa nkebi